♫♥✿*ကျွန်မ ရဲ့ နားခိုရာ ♫♥✿*: **အမိုး မဲ့ မေတ္တာအိမ်(တစ်ခြမ်းပဲ့ ကောင်းကင် )**
♫♥✿*ကျွန်မ ရဲ့ နားခိုရာ ♫♥✿*
**အမိုး မဲ့ မေတ္တာအိမ်(တစ်ခြမ်းပဲ့ ကောင်းကင် )**
ကျွန်မ ကလေးဘ၀ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆော့လို့ ဒူးကွဲ ပွန်းပဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ငိုယိုပြီးအ်ိမ်ပြန်လာတိုင်း ဂရုတစိုက်နဲ့ ထွေးပွေ့ နှစ်သိမ့်မယ့် ရင်ခွင်တစ်ခုမျှော်လင့်ခဲ့ဖူးတယ်
ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေ သရဲအကြောင်းပြောတဲ့နေ့ ကြောက်ရွံ့ မှုတွေနဲ့ ညဘက်မအ်ိပ်ရဲတဲ့ကျွန်မတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ခွင်မှန်းပြီး ငိုကြွေးခဲ့ဖူးတယ်
ကျွန်မဆယ်ကျော်သက်ဘ၀ လောကအကြောင်းဘ၀အကြောင်းတွေလေ့လာရင်း ဒီလမ်းကအကောင်းဒီလမ်းကအဆိုး ဆိုပြီးဖေးမလမ်းညွှန်ပေးမယ့် လက်တစ်စုံတမ်းတမိခဲ့တယ်
ကျွန်မ နှစ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ပညာစုံလို့ ဘ၀လမ်းလျှောက်တော့ တစ်ခါတစ်လေ လောကဓံကြောင့် နာကျင်ကြေကွဲစရာတွေ ကြုံလာတိုင်း ထွေးပွေ့အားပေးမယ့်စကားသံလေး ကြားချင်မိခဲ့တယ်
အခု ကျွန်မ သုံးဆယ်ကျော် ဘ၀ရဲ့လမ်းကို ဖေဖေ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒုက္ခကင်းကင်းနဲ့ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည် နေနိုင်ပြီမို့ ကျွန်မ ရဲ့ကျေးဇူးရှင် ဖေဖေရယ် မေမေရယ် တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက်တွဲပြီး ဘုရားအတူသွား ကျောင်းအတူတူ တက်စေချင်ခဲ့တယ်
မေမေကျွန်မတို့ သားအဖကို စွန့် ခွာသွားတာ အနှစ် ၃၀ တောင်ရှိပြီ အိမ်ထောင်သစ်မှာ မေမေအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြားတိုင်း ဖေဖေက ဟားတိုက် ရယ်မော နေတဲ့ အချိန်မှာ သမီးတိတ်တိတ်လေး ငိုကြွေးနေခဲ့တာ ပါ ၊သမီးဘ၀မှာ ဖေဖေ့ကျေးဇူးကြောင့် မတောင့်မတ မကြောင့်မကြ ဒုက္ခကင်းကင်းနဲ့ နေနိုင်ပေမယ့် မိခင်ရင်ခွင် ငတ်မွတ်ခြင်းသောက ဆိုတာအရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် မမျှခဲ့ပါဘူး မေမေ
မေတ္တာအိမ်လေးမှာ ဖေဖေက ဘေးရန်တွေ ကာဆီးပေးမယ့် ခိုင်ခံ့တံ့ နံရံလေးဘက်ဆိုရင် မေမေက သောကမိုးတွေ လောကဓံ လေပြင်းတွေ ကိုဖယ်ရှားပေးမယ့် ခေါင်မိုးလေးပါ မေမေ
ဖေဖေနဲ့မေမေ မေတ္တာ မျှလို့ အတူလက်တွဲခဲ့ တာပါ ဖေဖေနဲ့မေမေ တည်ဆောက်ထားတဲ့ မေတ္တာအိမ်လေးမှာ သမီးက ကံကောင်းလို့ ခိုလှုံခွင့်ရခဲ့တာပါ အဲ့ဒီမိသားစု ဆိုတဲ့ မေတ္တာအိမ်လေးမှာ ခေါင်မိုးနဲ့ တူတဲ့ မေမေမရှိဘဲ ကြီးပြင်းလာခဲ့ ရတာ မေမေ့အတွက် အရေးမပါ မလိုအပ်ဘူးထင်ပေမယ့် မြေဇာမြက် ဖြစ်တဲ့ သမီးအတွက် ကောင်းကင်ပြိုသလိုပဲ မေမေ
ဒီနေ့ ဟာ အများသူငါသတ်မှတ်ထားတဲ့ အမေများ နေ့ တဲ့
သမီးအတွက် အမေနေ့ ဆိုတာ သမီးကို သေမင်းနဲ့ ပြိုင်ပြီး လူ့ လောကထဲရောက်အောင်မွေးထုတ်ပေးတဲ့ နေ့ ဟာ ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အမေ့ နေ့ ပါမေမေ
အဲ့ဒီလိုပဲ လောကမှာ ရှိရှိသမျှ အမျိုးသမီးတိုင်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့နေ့ဟာ ကိုယ်တိုင်က မိခင်ဘ၀ရောက်မယ့်နေ့ပါ အဲ့ဒီနေ့ လေးကို ဂုဏ်ယူတယ် ဆို ကိုယ်တိုင်က မိခင်ဘ၀မရောက်ခင်မှာ ကိုယ့်ဘ၀ကို အလေးအနက်တန်ဖိုးထားပါ ငါဟာမိခင်လောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါလား လို့ အသိလေးထာပါ မိခင်ဘ၀ရောက်ရင်တော့ ငါဟာ မိသားစုဆိုတဲ့မေတ္တာအိမ်လေးမှာ အရေးကြီးတဲ့ ခေါင်မိုးတစ်ခုလိုပါလား လို့ အသိလေးထားပြီး သားသမီးတွေအတွက် နွေးထွေးလုံခြှုံမှုမေတ္တာအပြည့်ပေးနိုင်ကြပါစေ
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မိခင်ကောင်းဖြစ်မယ့် အမျိုးသမီးများအားလုံးကို လေးစားဦးညွတ်လျှက်
Written By ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ် )03:35PM 13.1.2014 http://www.haymonchan.blogspot.com/ http://www.facebook.com/yourthulay
Written By Aeimt Kabyar Mon at 5:46 AM
I hope for the best..But I prepare for the worse!
♥´*•♫ကျွန်မရင်ထဲကပြောပြချင်တဲ့ စကားလုံးတွေ ခံစားချက်တွေ ကိုနားထောင်ပေးမယ့်သူမ၇ှိလို့ 
ဒီနေရာလေးမှာ အမှတ်တရအနေနဲ့ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေ ကို သိမ်းထားတာပါ..မျက်စိလည်ရောက်လာတဲ့သူတွေကျွန်မသိမ်းထားတဲ့ ခံစားချက်တွေ ဘ၀အမြင်တွေကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်လေ့လာလို့ ရပါတယ်.
.အကြံပေးလို့ လဲရပါတယ်.မကျေနပ်လို့ ဆဲသွားလဲရပါတယ်..ကျွန်မကတော့ ရင်ထဲမှာ သိမ်းထားရတာ ပင်ပန်းလွန်းလို့ဒီနေရာလေးမှာ ပဲ.ခံစားချက်တွေ မြှုပ်နှံထားမှာပါ....♥´*•♫
♫♥✿*စာပေသစ္စာ♫♥✿* ငါသိ ငါတတ် ငါသာမြတ်ဟု စာဖတ်သူအား နှိမ့်ချထားကာ ၀င့်ကြွားမာန ထောင်းထောင်းထလျှက် အတ္တဒိဌိ ကိုယ်ဝယ်ငြိကာ ငါလေရေးခြင်း မဟုတ်ပါ။ ပညာရှင်များ ရေးဖွဲ့့ထားသည့် များပြားစာပေ အထွေထွေကို ရှာဖွေဖတ်ရှု လေ့လာမှု နှင့် အပြုသဘော ငါ့ညဏ် နှောလျှက် ရေးသောငါ့လက် ပင်ပန်းချက်ကို တက်မက်နှစ်ခြိူက် ရင်မှာပိုက်ရာ တစ်ပိုဒ်သာမျှ အမြတ်ရမှု ပန်းသမျှ ပြေပြီး အေးလိမ့်သော် မှန်းသမျှကျေပြီး တွေးချိတ်ပျော် (သုတေသီ ဘုန်းမြင့်သွေး) ........................... <!-ချမ်းချမ်း(ရွာသူလေး))-http://haymonchan.blogspot.com> .......
ချမ်းချမ်း အင်တာနက် သုံးတာ နှစ်နှစ်နီးပါး ကာလအတွင်းမှာ ဖတ်ခဲ့သမျှ Post တွေ Comment တွေ နဲ့ ပက်သက်ပြီး ရင်ထဲ၇ှိတာ ဝေဖန်ဆွေးနွေးချင်တဲ့အကြေ...
မြို့ တစ်မြို့ မှာ စီးပွါးရေးအဆင်ပြေပြီးချမ်းသာတဲ့ လင်မယားရှိပါတယ်။ စီးပွါးရေးအဆင်ပြေလာတော့ ထုံးစံအတိုင် ယောက်ျားဖြစ်သူ မှာ မြာပွေချင် လာပါတ...
ပြီးခဲ့တဲ့လက ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကိုယ်ဝန်သွားဖျက်တာ ကလေးက မကျလို့ တဲ့ ထိုင်းလက်သည်အိမ်ကနေပြန်လာပြီး မဲဆောက်က...
***အလှကြိုက်တဲ့ ညီမငယ်လေးများ သတိပြုဖို့ ***
ဒီတစ်ခါတော့ ညီမလေးတို့ အတွက် အလှအပဆိုင်ရာ သတိပြုစရာလေးတွေကို ချမ်းချမ်း သိသလောက်ပြန်လည် မျှဝေပေးမယ်နော်။ မိန်းကလေးတော်တော်များများ ဟာ အရွ...
(1) ***တစ်မူးသာတဲ့ အရူး*** စိတ်ကျန်းမာေ၇းဆေးရုံတစ်ရုံမှာ အရူးသူငယ်ချင်းသုံးယောက် ၇ှိပါတယ်...သူတို့ ဟာ ဆေးရုံထဲမှာ နေလာတဲ့ နှစ်တွေလဲ ကြာလာလ...
ဒီအဖြစ်အပျက်လေးက တကယ့်အဖြစ်အပျက်ပါ..နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့သူတွေ..ကြုံလေ့ရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပေါ.့. ကောင်းလေးတစ်ယောက်က ပျင်းလို့ ဆိုပြီးအသိတစ်...
***လူ့ အလို နတ်မလိုက်နိုင်***ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးလို ကျွန်မတို့ လူသားတွေရဲ့ လိုချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ တက်မက်နှစ်သ...
♫♥✿မြန်မာပြည်ကို ချစ်ပါလျှင် ♫♥✿
မှုခင်းသတင်းလေးတစ်ခုကြားပြီးကတည်းက ရင်ထဲတော်တော်လေးမကောင်းတာနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ ကို ရင်ဖွင့်တာပါ... မြန်မာလူမျိုး နှစ်ယောက် တစ်ယောက်က မိ...
ကျွန်မ ကလေးဘ၀ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆော့လို့ ဒူးကွဲ ပွန်းပဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ငိုယိုပြီးအ်ိမ်ပြန်လာတိုင်း ဂရုတစိုက်နဲ့ ထွေးပွေ့ နှစ်သိမ့်မယ့် ရ...
ဒီနေ့ ဖေစ့်ဘုတ်နဲ့ အင်တာတက်ပေါ်က စာမျက်နှာတော်တော်များများမှာ မျိူးချစ်အာဇာနည်တော်တော်များများ က မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် အသက်ပေးသွားတဲ့ ...
ဖြစ်ရပ်မှန် သုတ (1)
ရင်သို့ ထိသောစာ (1)
သုတ ဟာသ (2)
src="https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-snc4/276469_238284906194329_7488605_n.jpg" title="မြန်မာဆေးမြီးတို" />
true (or )not